Ukuba ujonge ukuthenga iselfowni enexabiso eliphantsi, ungaphoswa zezi zinto zikhutshelweyo | I-Androidsis
Ngaba uyafuna ukuthenga iselfowuni ebiza ixabiso eliphantsi? Thatha ithuba lokubonelela ngeMotorola
UNerea Pereira | | Motorola
Kwiiyure ezimbalwa ezidlulileyo sikuxelele malunga uhlaziyo lwamva nje lweMoto G5 kunye neMoto G5 Plus Baza kufumana i-Android 8.1 Oreo kungekudala. Sithetha ngezinye zeefowuni ezigqityiweyo eziphawulwe ngamaxabiso abo ahlengahlengisiweyo. Kodwa ngoku umenzi waseMelika uyiphosele ngaphandle indlu ngefestile ngokusungula isipho esikhethekileyo. Ufuna thenga iselfowni enexabiso eliphantsi? Esi sibonelelo seMoto G5 kunye nezinye iimodeli zenkampani ziya kukushiya uvule umlomo.
Kwaye yeyokuba kwiiyure ezizayo uya kuba nakho thenga iMoto G5 unikeze kwiAmazon ngesaphulelo sama-43 epesenti esenza ukuba i-terminal ihlale ngaphantsi kwama-euro angama-115. Ingaba ulunde ntoni fumana le thengiselwano ngale khonkco?
Sithetha ngefowuni eya kuthi ihlangane neemfuno zakhe nawuphina umsebenzisi uthenge ifowuni ye-android enexabiso eliphantsi ekuvumela ukuba ukhangele kwiinethiwekhi zentlalo, sebenzisa iinkonzo zemiyalezo ekhawulezileyo okanye ukonwabele imidlalo kunye nokusetyenziswa okufuna umthwalo omkhulu wemizobo. Kufuneka ikhunjulwe ukuba iMoto G5 inesikrini esine-intshi ezintlanu esifikelela kwisisombululo esipheleleyo se-HD, iprosesa yeQualcomm Snapdragon 5 kunye ne-430 GB ye-RAM kunye ne-2 GB yokugcina ngaphakathi.
Uthethathethwano ongafanele uluphose. Gcina ukhumbula ukuba le ntengiso yeyokwexeshana ukuba ufuna ezinye unikeze kwiAmazon Ukuthenga iifowuni eziphathwayo ngexabiso elifanelekileyo, eli lithuba lakho lokuthatha isiphelo sendlela esikhulu ekhaya ngexabiso elingenakubethwa.
1 Okuninzi ngeMotorola kwiAmazon xa ujonge ukuthenga ifowuni enexabiso eliphantsi
1.1 Thenga iMoto E4 Plus ngexabiso elingaphantsi kwama-130 euros
2 IMoto G5s kunye nelona xabiso lihle kwiAmazon: thenga le fowuni iphantsi nge-euro engaphantsi kwe-170
2.1 Thenga iMoto G5s kunye nentengiso kwiAmazon
2.2 Ngaba uyafuna ukubona umxholo wemultimedia? ungathandabuzi ukuthenga le fowuni ngexabiso eliphantsi
Okuninzi ngeMotorola kwiAmazon xa ujonge ukuthenga ifowuni enexabiso eliphantsi
Awunalo ixesha lokuthenga iMoto G5 ngexabiso elifanelekileyo kwiAmazon? Zolile okoko umenzi waseMelika usungule izibonelelo ezimbalwa ukuze ukwazi ukuthenga ifowuni enexabiso eliphantsi eliza kukunceda ukuba ulisebenzise ngesiqhelo. Ukuba uhlahlo-lwabiwo mali luxinene kakhulu, ngoku ungafumana i-Moto E4 Plus nge-124.95 euro kuphela kunye ne-2.99 euro yeendleko zokuhambisa.
Sithetha ngesixhobo esine-5.5-intshi yesikrini esine-HD resolution, iprosesa ye-Mediatek MT6737, i-3 GB ye-RAM kunye ne-16 GB yokugcina. Ewe, sisiphelo sendlela yokungena-ephakathi, kodwa iya kukukhupha ngaphandle kwengxaki ezininzi kwaye isaphulelo sama-37 seepesenti kwiAmazon siyenze ibe sisithembiso esinomtsalane, akunjalo?
Thenga iMoto E4 Plus ngexabiso elingaphantsi kwama-130 euros
IMoto G5s kunye nelona xabiso lihle kwiAmazon: thenga le fowuni iphantsi nge-euro engaphantsi kwe-170
Esinye isithembiso esinomtsalane ongasoze uphulukane naso xa unebhajethi enkulu kancinci Moto G5s Ukudibanisa. Isixhobo esipheleleyo esinesikrini esine-intshi ezi-5.5 ngesisombululo esipheleleyo se-HD, a Inkqubo yeQualcomm Snapdragon 625 Kunye neAdreno 506 GPU, 3GB ye-RAM kunye ne-32GB yokugcina kwangaphakathi.
Sithetha ngeselfowuni enexabiso eliphantsi ngenene kuba inesaphulelo sama-43 sepesenti ukuze ukwazi thenga iMoto G5s Plus ngee-euro ezingama-169.47 kuphela, ifumaneka ngombala omnyama. Ukuvumelana okuza kukuvumela ukuba uhambise uninzi lwezicelo kunye nemidlalo ngaphandle kwengxaki ngenxa yokuba iza ne-Android inyulu, ngaphandle kwalo naluphi na uluhlu lwesiko.
Thenga iMoto G5s kunye nentengiso kwiAmazon
Ngaba uyafuna ukubona umxholo wemultimedia? ungathandabuzi ukuthenga le fowuni ngexabiso eliphantsi
Nangona le fowuni inesaphulelo esisezantsi kunangaphambili, ukuba ufuna ukubukela imovie okanye uthotho kwiscreen esikhulu esinefomathi ye-18.5: 9, iMoto G6 lukhetho olukhulu lokuthenga ifowuni enexabiso eliphantsi. Sithetha ngesixhobo esinyusa i- Iphaneli ye-intshi eyi-5.7 nge-18.5: umlinganiso wenqaku le-9 elinika isisombululo esipheleleyo se-HD +.
Kufuneka iqatshelwe ukuba enkosi kwinkangeleko yayo, iMoto G6 ayinazo izakhelo ezisecaleni ukuze amava abukele umxholo wemultimedia agqityiwe. Ukuba songeza kule processor isisiseko seQualcomm Snapdragon 450 kunye ne-3 GB ye-RAM eza nesixhobo kunye nokugcinwa kwayo okungama-32 GB, sinesinye sezona zisombululo zilungileyo ekufuneka siqwalasele ukuba uyafuna thenga ifowuni enexabiso eliphantsi ukuba nawuphina umdlalo okanye usetyenziso lungakuhambisa.
Thenga ukuthengiswa kweMoto G6 kwiAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » Motorola » Ngaba uyafuna ukuthenga iselfowuni ebiza ixabiso eliphantsi? Thatha ithuba lokubonelela ngeMotorola
Ungabhloka njani ikuki kunye nemiyalezo yabucala ngeOpera Browser
I-Oukitel U23: inotshi yombala kunye negradient ngasemva